Global Voices teny Malagasy · admin – Jona 2009
admin · Jona, 2009
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Jona, 2009
Ejipta25 Jona 2009
Amerika Latina25 Jona 2009
Indonezia17 Jona 2009
Emirà Arabo Mitambatra10 Jona 2009
Air Bus AF 447: Alahelo, tsy fahampiam-baovao sy fanaitairana
Amerika Latina10 Jona 2009
Niteraka resabe sy fanontaniana maro indrindra koa fikarohana ho an'ny filazam-baovao ilay fiaramanidina frantsay Airbus izay nanjavona tsy hitan'ny radara ny alahady 31 may; avy any Rio de Janeiro ity fiaramanidina ity ary hankany Paris. Niainga tany Brésil ilay fiaramanidina ny alahady 31 may, nisy mpandeha 216 tao anatiny ary...
Myanmar (Birmania)05 Jona 2009
Nirodana nandritra ny asa fanavaozana azy ny fiangonana bodista iray, olona 5 farafahakeliny no maty ary mpiasa sy mpanao fivahinianana masina maro no naratra. Ny fiangonana ao Danoke taorian'ny fianjerany (New Era Journal) Any ampitan'ny reniranon'i Yangon ao amin'ny kaomina Dala, faritra Rangoun, no misy ity fiangonana ao Danoke ity,...
Nizera05 Jona 2009
Miakatra ny tosi-dra any Niger taorian'ny soson-kevitra nataon'ny filoha Mamadou Tandja hanao fitsapan-kevi-bahoaka, izay raha lany, dia hamela ny filoham-pirenena hanova ny lalàm-panorenana hahafahany manalava ny fe-potoana hiasany, izay efa naharitra 10 taona. Mamadou Tadja, filohan'i Niger hatramin'ny 1999, te hanova ny lalàm-panorenana hijanonany eo amin'ny fitondrana. Ny herinandro lasa...